के यो हिलारी क्लिन्टनको अन्त्य हो? | Martech Zone
सोमबार, मार्च 19, 2007 मङ्गलबार, अक्टोबर 4, 2011 Douglas Karr
यद्यपि म आफूलाई लिबर्टेरियनको रूपमा सोच्न चाहान्छु, सायद ममा अराजकतावादी छ। म इन्टरनेटको प्रजातान्त्रिकरणको साथै टेक्नोलोजीको कम लागतको पनि आनन्द लिन्छु। जो कोहीले यसलाई किनेका छैनन् उर्जा प्रदान गर्न उधारो दिन्छन्।
मुख्य मुद्दा भनेको एप्पल १ 1984। 300,000 को विज्ञापनमा हिलारी क्लिन्टनको हालसालै गरिएको प्यारोडी हो। भिडियो युट्यूबमा अपलोड गरिएको थियो र ,XNUMX००,००० भन्दा बढी पटक हेरिएको छ। व्यक्तिगत रूपमा, मैले यसबाट एक बकबक लिएँ। म सिनेटर क्लिन्टनको प्रशंसक होइन, यद्यपि म पूर्ण वक्ता र राजनीतिज्ञको रूपमा उनको श्रीमान्को प्रतिभालाई पूर्ण रूपमा बुझेको र सम्मान गरेको छु।
यस घर बनाइएको भिडियोको विडम्बना यो हो कि यसले दृश्यताबाट चिलको पुनरुत्पादन गर्दछ जुन म सिनेटका क्लिन्टनले बोलेको हरेक चोटि महसुस गर्दछु। म उत्सुक छु यस किसिमको भिडियोले अभियानमा कत्ति प्रभाव पार्न सक्छ। त्यहाँ भिडियोमा केहि छैन जुन हिलारी क्लिन्टनलाई राष्ट्रपतिको लागि गरीब छनौटको रूपमा औंल्याउँछ ... यो मात्र हो लाग्छ त्यो बाटो।
कसैले यो काम गर्नका लागि मात्र समय लिएन, त्यस्ता व्यक्ति थिए जसले सेनेटर ओबामालाई समर्थन गरिरहेका थिए। भिडियो राम्रो उत्पादन भएको छ र, म अनुमान लगाउँदै छु, विकसित गर्नको लागि समय बाहेक अरू केही खर्च भएन। के यो राष्ट्रपतिको लागि हिलारी क्लिन्टनको रनको अन्त्य हो?
यहाँ एप्पलबाट मूल विज्ञापन छ (दिन पछि सुपरबोबलको समयमा देखाइएको छ):
यो खराब राजनीति हो? खराब नागरिकता? के यो गैरजिम्मेवारपूर्ण हो? यस्तो छविमा जहाँ सार्वजनिक छवि सबै कुरा हो र राजनीतिज्ञहरूले लाखौं (चाँडै अरबौं हुने) त्यो छविलाई धम्काउन खर्च गर्छन्, यो विडम्बनापूर्ण कुरा होइन कि एकल व्यक्तिको हातमा राखिएको टेक्नोलोजीले सम्पूर्ण चुनावी बिगार्न सक्छ?
यो जब यो रमाईलो हुन्छ!
मार्स 20, 2007 मा 12: 19 एएम
मँ यो विज्ञापन मा गहिरो संदिग्ध छ।
साउन्डबाइट्स विज्ञापनको लागि पूर्ण गलत देखिन्छ। मैले बुझें कि मूलमा त्यहाँ केहि विडंबना छ, जुन हतौडाको साथ "हामी विजयी हुनेछौं" लाई जुटाउँछ। तर मूलमा, आवाजसँग यसको स्पष्ट रूपमा राम्रो गुण छ। यी साउन्डबाइटहरू हिलारीको नियमित व्यक्तिको रूपमा आउने स्पष्ट प्रयास हो, हामी प्रत्येकको साथ व्यक्तिगत रूपमा "कुराकानी" गर्दै, जबकि मूल विज्ञापनले "एक व्यक्ति, एक, एक संकल्प, एक कारण," र "को बगैचा" बोल्दछ। शुद्ध विचारधारा जहाँ प्रत्येक कार्यकर्ता खिलिन सक्छ, कुनै पनि विरोधाभासी विचारहरु को कीटहरु बाट सुरक्षित छ। " यस बीच, हिलारी साउन्डबाइट भन्छिन्, "म मसँग सहमत व्यक्तिहरू चाहन्न।" साथै, ठूला भाइको छवि अन्धकार छ, र मूल व्यवसायिकमा कालो पर्खालसँग मिसाइएको छ, जबकि क्लिन्टनको कल्पना चम्किलो सेतो छ, एकाधिकार कोठामा एक विकृति
यदि मैले यस भिडियोको श्रोतमा अनुमान लगाउनु पर्छ भने, म शर्त दिनेछु कि यो क्लिन्टन अभियानबाट आएको हो। मूलको कुनै ज्ञान बिना यसलाई हेर्ने कल्पना गर्नुहोस्। धेरै व्यक्ति सम्भवतः सक्कली रूपमा सबै याद गर्दैनन्। यहाँ क्लिन्टन भिडियोको वैकल्पिक व्याख्या गरिएको छ: क्लिन्टनले राजनीतिलाई प्रतिस्पर्धी खेलको रूपमा वा पक्षपाती लडाईको रूपमा प्रयोग गर्ने बानीहरूलाई ब्यूँझाउने प्रयास गर्दैछन, बरु छलफल, विचारको आदानप्रदान भन्दा सबैलाई कसरी अझ राम्रो बनाउने भन्ने बारेमा। हिलारी भन्छिन् कि यो "वास्तवमै राम्रो" छ कि "अहिलेसम्म हामीले कुरा गर्न छोडेका छैनौं।" यद्यपि, केहि दुष्ट शक्तिहरू तपाईले कुराकानी गरोस् भन्ने चाहनुहुन्न। हतौडा फ्याँक्नु भन्दा ठीक अघि स्क्रिनमा हिलारीले लेख्यो, "यो हाम्रो कुराकानी हो।" अर्को पटक हामी पर्दा देख्दा, हाँस्दै हिलारीले फेरि भन्छिन् "उनले यो कुराकानी जारी राख्छिन्", स्लेज हथौडा पर्दामा पर्दा ठीक पहिले। मूल विज्ञापनमा, स्लेजहैमर स्क्रिनमा क्र्यास हुने क्रममा प्रारम्भिक विस्फोट पछि, हामी एक हल्का, चिसो हावा सुन्नेछौं, स्वतन्त्रताको सुझाव दिँदै। यो आवाज क्लिन्टन भिडियोमा ढिलो भएको देखिन्छ, पिचलाई कम गरेर र शून्यता र निराशाको चिसो हावाको सुझाव दिँदै। यस बिन्दुबाट हामी वास्तवमै सोचिरहन्छौं कि "हाम्रो कुराकानी" अन्त्य गर्न को लागी यस्तो खराब होला र? त्यसपछि हामी एक चम्किलो सेतो पर्दा देख्छौं जसले भन्छ, "जनवरी १th मा, डेमोक्र्याटिक प्राथमिक सुरू हुनेछ। र तपाईले देख्नुहुनेछ कि २०० 14 '2008' जस्तो किन हुँदैन। "नोट गर्नुहोस् कि ओर्वेलको पुस्तकभन्दा अलग्गै राष्ट्रपति पदको राजनीतिमा १ 1984।। को महत्व छ। १ 1984। 1984 साल एक वाल्टर मोन्डाले एक निर्बाध उदारवादीको रूपमा चलिरहेको थियो, मिनेसोटा बाहेक राष्ट्रको हरेक राज्य गुमायो। क्लिन्टनसँग सम्बन्धित सेतो पर्दाले २०० 2008 मा फरक नतिजाको आश्वासन दिन्छ, जबसम्म यसमा बार्क ओबामाको वेब ठेगाना बोकेको कालो स्क्रिनले छोप्दैन। यो कुराकानी समाप्त गर्न चाहने मानिस हुनै पर्छ।
मार्स 20, 2007 मा 6: 45 एएम
लामो टिप्पणीको लागि धन्यवाद! पत्रकारहरू वास्तविक व्यक्तिलाई ट्र्याक गर्न खोजिरहेका छन् जसले यूट्यूबमा यो अपलोड गर्नुभयो - म पनि हेर्न उत्सुक छु। मलाई शंका हो यो क्लिन्टन अभियान थियो, यद्यपि। र म पनि शful्कास्पद छु कि यो ओबामा अभियान हो, ऊ आक्रमणको विज्ञापनको बारेमा आलोचनात्मक छ र यति टाढासम्म टाढिएको छ। मेरो अनुमान यो छ कि यो उनीहरूको हातहरूमा केही समय र केही राम्रो सफ्टवेयरको साथ ओबामा फ्यान थियो।
राजनीतिमा ध्यान केन्द्रित गर्नुको सट्टा, बजारका रूपमा मेरो लागि चासोको विषय यो के हो भने यसले यी सयौं लाखौं डलरलाई गर्छ कि यी मानिसहरू उनीहरूको अभियानमा खर्च गर्छन्। के यसले आक्रमणहरूलाई विफल पार्नेछ? तिनीहरूलाई सुदृढ पार्ने?
एउटा चीज मैले तत्काल थाहा पाएँ कि जोन म्याककेन विज्ञापनहरू गुगलमा हिलारी क्लिंटनको उल्लेखसँगै आएका थिए। यस्तो देखिन्छ कि म्याकेन क्याम्पले व्यवहार विज्ञापनमा मूल्य देख्दछ!
मार्स 20, 2007 मा 1: 51 एएम
"के यो हिलारी क्लिन्टनको अन्त्य हो?"
हामी पक्कै पनि त्यस्तै आशा गर्दछौं।
मार्क्स 20, 2007 मा 12: 21 PM
म prolly यस को केही पक्ष छु छु, तर के भिडियो मा "खराब" छ। मलाई एक राजनैतिक भाषणको बयानबाजी जस्तो देखिन्छ। मलाई थाहा दिनु।
मार्क्स 20, 2007 मा 3: 24 PM
यो हिलारी क्लिन्टन प्रेसिडेन्सीको तुलना १ 1984।। को अधिनायकवादी राज्यसँग छ। यदि तपाईंले पढ्नु भएको छैन भने १ 1984। XNUMX जर्ज ओर्वेल द्वारा, म यसलाई सिफारिश गर्दछु। यो द्रुत पढाई हो।
यो पक्कै पनि बधाई होईन।
मार्क्स 20, 2007 मा 3: 34 PM
आह, अब यो प्राप्त गर्नुहोस्। केहि बेर भयो र पढ्न कहिल्यै ठूलो भएन। Ironic म अनुसन्धान गर्न यति धेरै खर्च गर्दछु ...
मार्क्स 20, 2007 मा 12: 24 PM
यो हिलेरी १ 1984। Video भिडियो ओभरहाइप भइरहेको छ। त्यहाँ भन्दा बढि महत्त्वपूर्ण समस्याहरू छन्
कुनै वास्तविक सन्देशको साथ चलाख साना इन्टर्नेट विज्ञापन अभियानहरू, विशेष गरी त्यो वास्तविक पनि होइन।
मार्क्स 20, 2007 मा 3: 28 PM
तपाईंको पोइन्ट बिल्कुल वैध छ। दुर्भाग्यवस, धेरै मतदाताहरूले वास्तविक मुद्दामा मतदान गर्दैनन्, यद्यपि। मलाई लाग्छ कि यो एक आधुनिक दृश्य युग र राजनीतिको गल्तीहरू मध्ये एक हो। गलत वा सही, धेरै मतदाताहरू सजीलो बेरोजगार छन्।
यसैले मलाई लाग्छ कि यो एक रमाईलो घटना हो। यो केवल धेरै आउन आउने सुरुवात हो। मलाई अहिलेसम्म मतदाताहरूमा यसको प्रभावको बारेमा थाहा छ - तर त्यहाँ एक श doubt्का छ भन्ने कुरामा कुनै श .्का छैन।
मार्क्स 20, 2007 मा 8: 37 PM
म पूर्ण वक्ताको रूपमा उनको पतिको प्रतिभालाई पूर्ण रूपमा बुझें र सम्मान गर्थें
कहिलेकाँही चीजहरू हास्यास्पद हुन्छन्, जब चाहिएको थिएन। म आशा गर्दछु कि तपाई डबल अर्थको बारे सचेत हुनुहुन्छ कि कुनै पनि वाक्यले "क्लिन्टन" र "मौखिक" words शब्दहरू समावेश गर्दछ
मार्क्स 26, 2007 मा 2: 16 PM
यो एक पावर विज्ञापन हो, विशेष गरी यदि तपाईं मूलसँग परिचित हुनुहुन्छ (रिडले स्कट द्वारा, मलाई लाग्छ)। यो हिलेरीको अन्त्य हुने छैन किनकि त्यहाँ धेरै अन्य महत्वपूर्ण मुद्दाहरू जोखिममा छन्, तर यो यहाँ राम्रो शट हो। मान्छे को बारे मा व्यापार जो यो बनाएको देखि यसलाई विच्छेद देखिन्छ।
मार्क्स 26, 2007 मा 6: 18 PM
मैले सुनेको थिएँ कि उनी ओबामाको लागि केहि काम गरिरहेका कम्पनीमा सब कन्ट्र्याक्टर थिए तर उनलाई हटाइयो। त्यो दुर्भाग्य हो - मलाई पक्का लाग्दैन कि विज्ञापनमा नकारात्मक केहि पनि थियो, यद्यपि त्यहाँ एक निश्चित विषयवस्तु थियो! म मान्छे राम्रो इच्छा, यो वास्तव मा एक राम्रो शट थियो।
अप्रिल 7, 2007 मा 2: 29 PM
त्यो मैले देखेको सब भन्दा अचम्मको कुरा हो।